Wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo sheegay in ay Hay’ad qorsheysan inay dilaan - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo sheegay in ay Hay’ad qorsheysan inay...
Wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo sheegay in ay Hay’ad qorsheysan inay dilaan
Wasiiru Dowlaha Wasaarada Maaliyada Dowlada Federaalka Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa ku eedeeyey Jay Bahdur iyo urur aan dowli aheyn oo fadhigiisu yahay dalka Switzerland iney jabsadeen Emeil-kiisa islamarkaana qorsheynayaan iney dilaan.
Hay’daan ayaa wada baaritaano ku saabsan kaluumeysiga sharci darada ah ee laga sameeyo xeeebaha Baddweynta Hindiya dalka Soomaaliya, sida lagu daabacey jariidada Nation ee ka soo baxda dalka Kenya.
Nefco oo la shaqeysata shirkado Kaluumeysi oo dalka Shiinaha laga leeyahay ayaa Bahdur waxaa uu baaritaankiisa ku sheegey in inta badan Kalluunka si sharci daro ah ku qabsadaan iyagoo taageero ka helaya saraakiil sare ee ka tirsan dowlada Federaalka Soomaaliya.
Bahdur iyo hay’adda Giato ayaa baaritaano ku wada koox saraakiil Soomaali ah kuwaas ay ku tuhunsan yihiin iney gacansiinayeen shirkad Nefco oo muddo Sodon Sano ah ku jirtey ka ganacsiga Kaluunka.
Wasiiru dowlaha Wasaarada Maaliyada ayaa sida Jariidada Nation daabacdey dacwadiisa ku gudbiyey in Jay Bahdur iyo Giato ay jabsadeen emeil-kiisa islamarkaana kala baxeen xoggo muhiim ah kuwaas oo ay u isticmaaleen warbixintooda, waxaana uu rabaa in Maxkamada sare ee Kenya soo faragliso. Xayir ma uusan xusin sababta dalkiisa dacwadaan uga xereyn waayey.
Maxamuud Xayir ayaan beenin eedeymaha la xiriira inuu ku lug lahaa Kaluumeysiga sharci darada ah, balse ku dacwoonaya in kaalinta uu ku lahaa arimaha la xiriira soo saarista ruqsooyinkaan in lagu heley si sharci daro ah madaama emeil-kiisa la jabsadey. Inta badan saraakiisha lagu xusey warbixinta “Giata” iyo xiriirka ay leeyahiin shirkada la yiraahdo “China Overseas Fisheries